'Ghostbusters: aorian'ny fiainana' dia mahazo afisy roa miendrika maso - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Ghostbusters: aorian'ny fiainana' dia mahazo afisy vaovao roa
'Ghostbusters: aorian'ny fiainana' dia mahazo afisy vaovao roa
Mbola tsy misy mariky ny bandy!
by Trey Hilburn III Septambra 22, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 22, 2021 1,707 hevitra
Sony dia namoaka peta-drindrina roa lehibe ary mahasarika maso ho an'ny Ghostbusters: Aorian'ny fiainana. Samy manasongadina ny ankizy amin'ny fomba lehibe izy roa. Ny iray amin'izy ireo dia manipy ny toetran'i Paul Rudd ihany koa. Misy ihany anefa ny lesoka kely vitsivitsy amin'ireo afisy ireo… azonao an-tsaina ve izany?
Ny OG Ghostbusters mbola tsy nanao endrika ivelany. Raha ny marina dia aleontsika manao an'io. Manantena aho fa afaka mitazona ny fahitan'ireo tovolahy mitazona ny lambany mandra-pilatsaky ny horonantsary. Ho fanandramana majika ny miaina izany ara-organika nefa tsy misy mpampihomehy. Hatreto, ny ekipa marketing dia nanao asa mahatalanjona hitazomana izany.
Hatreto, ny vahiny Things mihaona Ghostbuster-andininy dia tena mahafa-po raha tsy misy fahasamihafana kely amin'ny zavatra nandrasana. Na izany aza, na inona na inona Ghostbusters manaitaitra foana.
Inona no hevitrareo lehilahy momba ireo afisy vaovao Ghostbusters: Aorian'ny fiainana? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.